Takhalusid music ka iPad in Dufcaddii
> Resource > iPad > Sida loo Delete Music ka iPad
Hi. Marka asal ahaan waxaan Lugood iyo iPad synced, oo dhan music ka soo gudbeen la daadiyo ah. Music ayaa hadda kor u bannaan oo aad u badan. Waxaan updated aan goobaha u hagaagsan gudahood Lugood si ay u muujiyaan in ay tahay in nidaamka kaliya ee Chine (ma music ah). Si kastaba ha ahaatee, dhammaan music waa horeba on my iPad. Ma jiraa wax aan ka saari kara music ka iPad aan heesaha oo dhan aan ka Lugood laga badiyay (waa iga cabsan)?
Ku raaxayso ciyaaro music on your iPad, sida iPad 2? Waxay u egtahay weyn. Si kastaba ha ahaatee, heeso badan oo ku saabsan iPad soo qaato oo aad u badan meel lagu kaydiyo. Marka meel lagu kaydiyo yar baa ka hadhay, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in la sameeyo qaar ka mid ah ka saarida music qolka u files cusub. Sida user ee kor ku xusan, haddii aad u hagaagsan aad iPad la Lugood, aad waayi doonto heesaha oo dhan ku daray hore aad iPad. Haddii aad ka walaacsan tahay, waxaan idinku talinaynaa qalab waxtar leh - Wondershare TunesGo (Windows) ama Wonershare TunesGo (Mac) . Waxaa kuu saamaxayaa inaad tirtirto heeso badan iPad iyo playlists mar. Intaa waxaa dheer, songs ee Lugood weli waxaa jiri doona ka dib markii ardayga.
Sidee in ay tirtirto heeso ka iPad in Dufcaddii
Hadda, aan ka eeg sida ay u tirtirto heeso ka iPad 2 ee 2 tallaabooyinka. Download qalab this on your computer. Waxaan jeclaan lahaa in ay tirtirto music iPad on computer Windows ah. Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxaad qaadi karaan tallaabooyinka ka midka ah ee aad Mac.
Ku rakib qalab aad kombuutarka. Waxay u ordeen inay kor u furmo suuqa hoose.
Tallaabada 1. Orod barnaamijkan iyo xiriiriyaan iPad la PC
Connect aad iPad la PC ka via cable USB ah. Qalabkani waxa uu isla markiiba lagu ogaan doonaa iPad oo tus in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Delete heeso ka iPad in Dufcaddii
Markaas, guji "Media" khaanadda bidix ee kooxda. Guji "Music", badhanka ugu horeysay on line ugu sareeya inay soo qaadaan suuqa kala music ah. Haddaba, xulo heeso aad rabto in aad tirtirto, ka dibna riix "Delete".
Ka sokow la tirtiro music ka iPad, waxa kale oo aad marna masixi karin playlists caadi ah aan loo baahnayn. Guji "playlist" inay soo qaadaan suuqa kala playlist ah. Sidoo kale, doortaan playlists aad rabto in aad tirtirto oo guji "Delete".
Hambalyo! Waxaad u suurtagashay in ay tirtirto music on iPad 2. Haddii aad qaadatay tan oo sawiro aad iPad, waxa kale oo aad kartaa in aad tirtirto photos ee iPad Camera Roll mar.
TunesGo si buuxda u la jaan qaada oo dhan iPad daydo socda macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7, 8 macruufka iyo xataa macruufka dambeeyay 9. Waxay yihiin iPad mini, iPad bandhigay isha, iPad Cusub, iPad Air, iPad 2 iyo iPad.
Waqtigan xaadirka ah, laguuma ogola in ay tirtirto playlists smart.
Daawo Video in ay tirtirto Music ka iPad